Iimbono ezintle kunye nendlu entle!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRuth Anne
Indlu ilungele abo bafuna loo nto incinci eyongezelelweyo kwaye siyathembisa ukuba ukuhlala kwakho kuya kuba ngamava oya kuwakhumbula ngokuvuya kwiminyaka emininzi ezayo.
Wamkelekile kwindlu yethu entsha ngaselwandle kunye neentaba, kufutshane neNyksund eVesterålen. Indlu ibekwe kanye phezu kolwandle kwaye inomgangatho ophezulu. Indlu ikulungele wena ofuna loo nto incinci kwaye siyathembisa ukuba ukuhlala kwakho kuya kuba ngamava.
Indlu eSkåltofta - eNyksund
Wamkelekile kwindlu yethu entsha ngaselwandle ebekwe kwiintaba zaseNyksund. Lo mhlaba ukhethekileyo umi ngaphandle kwelali yokuloba edumileyo iNyksund, kwisithili saseVesterålen. Ikwakufuphi nolwandle oluvulekileyo kwaye iGreenland ingumhlaba okufutshane ngqo eNtshona.
Sinikezela ngamagumbi okulala amane aneebhedi ezitofotofo, amagumbi amabini okuhlambela amahle kunye neembono ezimangalisayo ezivela kuwo onke amagumbi endlwini. Indlu ilungele abo bafuna loo nto incinci eyongezelelweyo kwaye siyathembisa ukuba ukuhlala kwakho kuya kuba ngamava oya kuwakhumbula ngokuvuya kwiminyaka emininzi ezayo.
Xa ungayonwabeli imisebenzi emininzi ngaselwandle, iindwendwe zinokukhetha ukukhwela intaba kwiintaba ezinkulu, ukutyelela igalari okanye ukuphumla nje kwikhefi okanye kwindawo yokutyela (evaliweyo eVinter) eNyksund.
Ibhonasi eyongeziweyo efunwa ngabatyeleli abaninzi kule nxalenye yehlabathi ngumbono wezibane ezisemantla kunye nelanga lasezinzulwini zobusuku elinokufunyanwa endlwini. Indlu inika into kumntu wonke ngamaxesha onke onyaka. Ebusika, unokuhlala kwigumbi lokuhlala ubukele abalobi elwandle. Ngexesha lasehlotyeni, ilanga nolwandle zenza imifanekiso emitsha imini yonke. Ixesha lasentlakohlaza livelisa intaka etyebileyo kwaye ukwindla kunemibala eqaqambileyo. Uqinisekile ukuba ufumana ixesha lonyaka elibonelela ngamava awodwa kutyelelo lwakho.Huset på Skåltofta - ved Nyksund
Indlu imi kanye elwandle, yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2016, kwaye inomgangatho ophezulu. Ukusuka apha ungonwabela iimbono ezintle kunye nezilwanyana zasendle ezityebileyo unyaka wonke, kuzo zonke iintlobo zemozulu. Ilanga ezinzulwini zobusuku, ekwindla kunye nobusika kunye nezivunguvungu ezinobundlobongela, izibane ezisenyakatho, ukuloba i-cod, kunye nesilwanyana esityebileyo ngokungaqhelekanga kunye neentaka, kunye ne-i.a. iminenga, iintini kunye namaxhalanga. Ufumana imifanekiso emitsha ngalo lonke ixesha.
Sinikezela ngamagumbi okulala amane aneebhedi ezilungileyo, amagumbi amabini okuhlambela amahle kunye nendlu esebenzayo eyakhiwe ngenjongo yokukwazi ukuthatha indalo. Indlu ikulungele wena ofuna loo nto incinci kwaye siyathembisa ukuba ukuhlala kwakho kuya kuba ngamava.
Xa ungekho elwandle, ekuhambeni ezintabeni, kwigalari yokutyelela eNyksund okanye kwindawo yokutyela eyona ndawo (evulekileyo ehlotyeni) - ngoko unokonwabela indawo engqongileyo ekhaya ngombono omangalisayo kumagumbi amaninzi endlwini. .
Umbuki zindwendwe ngu- Ruth Anne